XOG: Kulamo iska soo horjeeda oo Madaxda Galmudug ay ku kala leeyihiin Dhuusamareeb & Cadaado – XAMAR POST
Waxaa saacaddihii lasoo dhaafay kulamo kala duwan looga hadlaayo Xaaladda Galmudug ay ka dhaceen Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado.
Madaxweynaha Galmudug iyo Guddoomiye ku xigeenada Baarlamaanka Galmudug ayaa xalay kulamo gooni gooni ah Magaalada Dhuusamareeb kula qaatay waxgaradka Galmudug ee ku sugan Magaaladdaasi.
Waxa ay Madaxweynaha ugu baaqeen waxgaradka in si deg deg ah loo dhameystiro heshiiskii Galmudug iyo Ahlusunna, waxaana sidoo kale Madaxweynaha uu Odayaasha kala hadlay dhismaha Golaha wasiiradda Galmudug.
Dhanka kale Magaalada Cadaado Madaxweyne ku xigeenka iyo Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xalay kulamo kala duwan kula qaatay waxgaradka Magaalada Cadaado.
Sidda ay xaqiijiyeen Qaar ka mid ah dadkii kulanka ka qeyb galay waxgaradka ayaa ka codsaday Madaxweyne ku xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka in ay xaaladda dejiyaan,islamarkaana Khilaafka taagan Wadahadal lagu dhameeyo.
Waxaana ay sheegeen waxgaradka in Magaalada ay tahay xarunta Baarlamaanka Galmudug,islamarkaana kulamo ka baxsan aysan aqbali doonin, ayna doonayaan in la keeno Baarlamaankii horay loogu ballanqaaday.
Midowga Europe oo ka digay khilaafka Khaliijka in uu saameeyo Soomaaliya